Wednesday, 19 May 2021, 01:16
Zimbabwe conducts tests for Indian variant following death of Kwekwe man
She was addressing a post-cabinet media briefing. To date, Zimbabwe has recorded 38,572 COVID-19 cases including 36,349 recoveries and 1,582 deaths ... Meanwhile, Mutsvangwa said citizens coming to Zimbabwe, including those found positive for COVID-19, will now be quarantined at their own expense.
Pakistan beat Zimbabwe in second Test ... Pakistan beat Zimbabwe in second Test ... The Pakistan cricket team bossed the show against Zimbabwe in the second Test match to win the series 2-0 ... After posting 510/8 declared, Pakistan bowled out Zimbabwe for 132 in the first innings ... Zimbabwe were bowled out as Hasan Ali claimed a fifer (5/27).
The bridge will facilitate regional freight transport by allowing trucks to bypass the notorious Beitbridge border post between Zimbabwe and South Africa, which is perennially congested, with vehicles spending hours – and sometimes days – queueing to cross.
The Pakistan Skipper is very happy with his players, especially Abid Ali who scored double century in Test match against Zimbabwe ... He made this statement while speaking at the post-match presentation.
Mmegi Online 10 May 2021
Senior officials from Botswana and Zambia are working with Zimbabwe on how to include the country in the US$260 million Kazungula Bridge project ... “Upon the coming into the office of the second administration (post-Mugabe), Zimbabwe has come on board and now the bridge is now owned by three countries.
Pakistan’s Babar looks to West Indies after victory
Taipei Times 10 May 2021
Pakistan captain Babar Azam yesterday lauded his players after they completed a successful southern Africa tour with a second straight innings victory over Zimbabwe — then looked ahead to his team’s planned tour of the West Indies in July ... Zimbabwe, who resumed at 220 for nine, were all out for 231.
He took five for 52.</p>Zimbabwe, who resumed at 220 for nine, were all out for 231.</p>Speaking at the post-match presentation, Babar said his players had shown character and he was particularly pleased with the performance of the batsmen, especially man-of-the-match ...
The bridge will facilitate intra-regional freight transport by allowing trucks to bypass the notorious Beitbridge border post between Zimbabwe and South Africa, which is perennially congested, with vehicles spending hours and sometimes days queueing to cross.An aerial view of ...
Abid Ali on Saturday broke former skipper Younis Khan's eight-year-old record of the highest score by a Pakistan batsman in Zimbabwe in the longest format of the game ... He posted his maiden half-century in 86 balls and then spanked Zimbabwe bowlers for boundaries to score his next 45 runs from 18 balls.
Abid Ali breaks Younis Khan’s 8-year-old record in Zimbabwe
Abid Ali on Saturday broke former skipper Younis Khan’s eight-year-old record of the highest score by a Pakistan batsman in Zimbabwe in the longest format of the game ... He posted his maiden half-century in 86 balls and then spanked Zimbabwe bowlers for boundaries to score his next 45 runs from 18 balls.
Pakistan bowler Nauman Ali, who whacked five sixes against Zimbabwe on Saturday, had worked on his batting skills after the conclusion of the South Africa series earlier this year ... He posted his maiden half-century in 86 balls and then spanked Zimbabwe bowlers for boundaries to score his next 45 runs from 18 balls.
Zimbabwe were 52 for four and found themselves in a precarious position as they needed another 259 runs to avoid the follow-on and trailed Pakistan's 510 for eight declared by a whopping 458 runs ... He posted his maiden half-century in 86 balls and then spanked Zimbabwe bowlers for boundaries to score his next 45 runs from 18 balls.
But before that, at least starting from around 2006, Zimbabwe had been approached to partner in the mega-project ... “Upon the coming into the office of the second administration (post-Mugabe), Zimbabwe has come on board and now the bridge is now owned by three countries,” he told the gathering near Chirundu.
Babar Azam will look to continue his unbeaten record as Pakistan Test captain when Zimbabwe and Pakistan clash in the second and final Test at the Harare Sports Club on Friday. Pakistan won the first Test at the same venue comprehensively beating Zimbabwe by an innings and 116 runs ... In the first Test, Zimbabwe won the toss and opted to bat ... ZIMBABWE.
Apart from declaring that “Zimbabwe is Open for Business”, President Mnangagwa has also reached out to the world through the engagement and re-engagement drive ... General Clark is visiting Zimbabwe as a private citizen interested in learning more about possible business opportunities here,” read the statement posted on Twitter.